Adeeg | Xuzhou Sunbright Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd.
Nidaamka Soo Celinta
Haddii ay dhacdo inay lagama maarmaan noqoto in qayb looga soo celiyo shirkadeena, habraaca soo socda waa in la raaco: Kahor rarka maaddada, hel Foomka RMA (Waxyaabaha Soo Celinta). Lambarka RMA, sharaxaadda qaybaha soo noqoshada, iyo tilmaamta maraakiibta ayaa lagu darayaa Foomka RMA. Lambarka RMA waa inuu ka muuqdaa banaanka baakadaha rarka. Soo celinta alaabada lama aqbali doono haddii lambarka RMA uusan si muuqata u muuqan.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan dayactirka, qeexitaannada farsamo ama cilladaha qalabka, ha ka waaban inaad nala soo xiriirto isla markiiba.